Qoraallada James Daily ee ku saabsan Martech Zone |
Maqaallada by James Daily
James Daily waa qoraa xirfadle ah isla markaana ku takhasusay suuqgeynta waxyaabaha. Marka uusan ku lug lahayn howlaha la xiriira shaqadiisa, wuxuu raacayaa dano kale oo badan, oo ay ku jiraan cilmiga xiddigiska, cilmu-nafsiga, iyo shineemo. Xor ayaad u tahay inaad kula xiriirto adoo adeegsanaya boggiisa gaarka ah Maskaxdaran.
Isniin, Oktoobar 8, 2018 Isniin, Oktoobar 8, 2018 James Daily
Waxaad horeyba u ogtahay inaadan haysan miisaaniyada suuqgeynta ee aad kula tartami karto “wiilasha waaweyn”. Laakiin warka wanaagsan ayaa ah tan: dunida dhijitaalka ah ee suuqgeyntu waxay u dhigantaa goobta si aan hore loo arag. Ganacsiyada yar-yar waxay leeyihiin goobo iyo xeelado fara badan oo wax ku ool ah oo qiimo jaban leh. Mid ka mid ah kuwan, dabcan, waa suuq-geynta waxyaabaha ku jira. Xaqiiqdii, waxay noqon kartaa tan ugu kharash-ku-oolsan dhammaan xeeladaha suuq-geynta. Waa kuwan xeeladaha suuqgeynta waxyaabaha ku jira